မေတိုးခိုင် ရဲ့ ဆို့အောက် သတင်းလေးလည်းဖက် ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ကြဆိုတဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး – Let Pan Daily
မေတိုးခိုင် ရဲ့ ဆို့အောက် သတင်းလေးလည်းဖက် ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ကြဆိုတဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရ တဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာ ရှင် တစ်ဦးပါ။ သူမက မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး တွေထဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ဦး ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
သူမက အနုပညာကိုကြိုးစားလုပ်ရင်း ချစ်ရတဲ့ မိသားစုလေး နဲ့ အတူ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်း နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တူမ မေတိုးခိုင် ဆို့အောက်…..￼
ဆို့အောက်သတင်းလေးလည်းဖတ်… ကျန်းမာရေး လည်း ဂရုစိုက်ကြနော်.အမျိုးတွေကိုစိတ်ပူတယ် … မလိုအပ်ရင် အပြင်မထွက်ပါနဲ့…. ကျန်းမာမှ သတင်းတွေဖတ်နိုင်မှာ….အခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်..
မတေိုးခိုငျ ရဲ့ ဆို့အောကျ သတငျးလေးလညျးဖကျ ကနျြးမာရေးလညျး ဂရုစိုကျကွဆိုတဲ့ ဟနျငွိမျးဦး
နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ အိန်ဒွာကြျောဇငျ ဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှခေဈြခငျအားပေးရ တဲ့ နိုငျငံကြျော အနုပညာ ရှငျ တဈဦးပါ။ သူမက မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီး တှထေဲမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ ဝါရငျ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး တဈဦး ဆိုလညျးမမှားပါဘူး။
သူမက အနုပညာကိုကွိုးစားလုပျရငျး ခဈြရတဲ့ မိသားစုလေး နဲ့ အတူ ဘဝကိုအေးခမျြးစှာ ဖွတျသနျး နသေူပဲဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒွာကြျောဇငျ တူမ မတေိုးခိုငျ ဆို့အောကျ…..￼
ဆို့အောကျသတငျးလေးလညျးဖတျ… ကနျြးမာရေး လညျး ဂရုစိုကျကွနျော.အမြိုးတှကေိုစိတျပူတယျ … မလိုအပျရငျ အပွငျမထှကျပါနဲ့…. ကနျြးမာမှ သတငျးတှဖေတျနိုငျမှာ….အခုလိုအဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော..
အမိုကျစား ပုံစံလေး နဲ့ အရမျးကို လှလှနျးနတေဲ့ မပေနျးခြီ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ
အသညျးယားစရာ ကောငျးအောငျ အမိုကျစား ပို့ဈတှေ ပေးနေ တဲ့ လုလုအောငျ